Barre Hiiraale oo si cad u diiday inuu wadahadal la galo Axmed Madoobe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Barre Hiiraale oo si cad u diiday inuu wadahadal la galo Axmed Madoobe
Kismaayo – Mareeg.com: Col. Barre Aadan Shire “Hiiraale” oo dagaal looga saaray magaalada Kismaayo, islamarkaana dhowr bilood isaga iyo ciidamo uu wato ku sugan yihii banaanka magaalada ayaa ka horjeestay dedaal uu halkaas ka weday Raysul wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed, kaasoo lagu doonayey in kooxaha ka horjeeda maamulka uu hogaamiyo Axmed Madoobe ee Juba, kusoo biiraan maamulka.
Barre Hiiraale oo wareysi siiyay VOA, ayaa wuxuu sheegay in magaalada Kismaayo ay ka socdaan wax uu ku tilmaamay xasuuq bini’aadinimo, sidaas darteedna uusan aqoonsaneyn maamulka Juba, wadahadalna uusan la geli doonin, uuna la dagaalamayo.
“Iska daa inaan wada hadal la galo maamulka la yiraahdo Jubba, maba aqoonsani, waxaan la geli doonaa dagaal” ayuu yiri Barre Hiiraale.
“Magaalada dadkeeni baa jooga qofkii la dilo, qofkii la dhaco, qofkii la kufsado dhamaan anaga ayeey nala soo xiriiraan, dadka waa lagu tuntaa Kismaayo waa la laayaa” ayuu sidoo kale yiri Hiiraale.
Safarka Ra’iisul Wasaaraha ayuu Barre Hiiraale ku tilmaamay inuu yahay mid nasiib daro ah, maadaama sida uu yiri uu marti u noqday koox Kismaayo dadka ku leysa.
“Waa nasiib daro weyn safarka uu Ra’iisul Wasaaruhu ku tagay Kismaayo oo uu marti ugu noqday isagoo Ra’iisul Wasaarihii dalka ah koox dadka ku leysa magaalada, anagana marnaba dagaalka ma joojineyno ilaa dadka reer Kismaayo xoriyad ka helayaan”ayuu sidoo kale yiri Col. Barre Hiiraale.
Raysulwasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed ayaa muddo todobaad ah ku sugan magaalada Kismaayo, si uu isugu soo dhaweeyo maamulka JUBA ee Axmed Madoobe hogaamiyo iyo raga watay maleeshiyaadka kazoo horjeeda.
Cabdi Jiinow: Sharciga ayaa la keeni doonaa dadkii booliska ku laayey Balcad
Wasiir Goodax: Ma jirto aniga ayaa maamulka degmada taabsaday